Isitayile seBoutique iVilla kunye neSpa. Imizuzu emihlanu ukuya kwiziko leSixeko.
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguPaul
Phila kwindawo emangalisayo, yenkulungwane ye-villa eyenziwe yangoku ngokupheleleyo kwinkulungwane yama-21. Umgama nje wemizuzu emibini ukuya ePonsonby Rd-ikhaya labayili boutiques kunye nezona ndawo zityiwayo zaseNZ. Pheka ekhitshini lomyili ngaphambi kokuba uye kwintendelezo ephefumlelweyo yaseBalinese kunye negadi yaseTropiki. Hlala emva kwaye uthobe iinkxalabo zakho kude kwiphuli ye-spa ye-hydrotherapy ngelixa umamele ingoma yeentaka zemveli.
* Yimizuzu emihlanu kuphela ngemoto ukuya kumbindi wesixeko kunye nesikhululo sesikhephe
* Olona lwandle lukufutshane lwesixeko lukude ngemizuzu emihlanu
* Uluhlu oluhle lweecafe zasekhaya, iivenkile zoyilo kunye neeresityu emnyango wakho
* Uyilo lwangaphakathi olugcinwe kakuhle
Phila kwindawo emangalisayo, yenkulungwane ye-villa eyenziwe yangoku ngokupheleleyo kwinkulungwane yama-21. Umgama nje wemizuzu emibini ukuya ePonsonby Rd-ikhaya labayili boutiques kunye nezona ndawo zityiwayo zaseNZ. Pheka ekhitshini lomyili ngaphambi kokuba uye kwintendelezo ephefumlelweyo yaseBalinese kunye negadi yaseTropiki. Hlala emva kwaye uthobe iinkxalabo zakho kude kwiphuli ye-spa ye-hydrotherapy ngelixa um…
“Kia Ora kwaye wamkelekile! Ukuba uyazixabisa iihotele ze-boutique uya kulithanda ikhaya lethu.”
- Paul, umbuki zindwendwe wakho
I-Queen bed, Umatrasi oyi-pillow-top
Igumbi lokuhlambela elisegumbini lokulala, I-King bed, I-valet ezimeleyo, Umatrasi oyi-pillow-top, Umatshini okhupha umoya obandayo okanye oshushu
4.94 (iingxelo zokuhlola 18)
I-Ponsonby-Fumana le hip kunye nobumelwane obuntsonkothileyo, yazi ngeekhefi zayo ze-chic, iibhari, iindawo zokutyela, ifashoni yomyili ekhethekileyo, izinto zasekhaya eziphezulu, ubucwebe obuphezulu, izixhobo kunye neemarike zeengcali. Jonga ubugcisa bendawo, ubugcisa kunye neegalari. Ukuhamba nje kwemizuzu eli-10, okanye uhambo olukhululekileyo ukusuka kumbindi wesixeko, amakhaya ayo ngumxube ophilileyo wezindlu ezibuyiselweyo zelifa kunye neegugu zale mihla. Xa kuhlwa, bamba igig yomculo ephilayo okanye udanise kude kube sebusuku njengoko ii-DJs eziphezulu zijikeleza iidekhi zazo.
Umgama ukusuka eAuckland Airport
imizuzu eyi-23 ngemoto xa indlela ingaxakekanga
We are a British & Samoan couple who enjoy sharing our beautiful home. We are both 'foodies' and love to share our local recommendations! We also enjoy great coffee, cooking, long…